Liverpool 4-1 Stoke: kooxda Jurgen Klopp oo soo yareysay farqi... | Universal Somali TV
Liverpool 4-1 Stoke: kooxda Jurgen Klopp oo soo yareysay farqiga u dhaxeeya Chelsea
December 27 2016 20:36:31
Liverpool ayaa soo yaraysay farqiga u dhaxeeya ee kooxda hogaanka haysa ee Chelsea oo lix dhibcood ka horaysa ka dib markii ay 4-1 ku garaacday Stoke City ee garoonka Anfield kulankii caawa.
Stoke ayaa gool ugu horeeyay kaga naxsatay Reds laakiin Adama Lallana ayaa Liverpool u keenay goolka barbaraha ka hor intii aanu qaab cajiib ah Roberto Firmino goolka labaad hogaanka ugu dhiibin kooxdiisa dhamaadkii qaybtii hore ee kulanka.
Liverpool ayaa qaybtii danbe ee kulan wax kasta garoonka ka samaysay waxayna la timid laba gool oo kale iyada oo waliba Daniel Sturridge uu goolkiisii xili ciyaareedkan ee Premier Leaque-ga ugu horeeyay uu ku dhaliyay 56 ilbidhiqsi oo kaliya.
Liverpool ayaa yeelatay 40 dhibcood oo ay ka heshay 18 kulan waxayna wali culayska ku sii haysaa Chelsea oo kaalinta kowaad ugu jirta 46 dhibcood isla markaana xalay gaadhay guusheedii 12 aad oo xidhiidh ah.
Kan-xigaEden Hazard oo sheegay in kooxda chel...
Kan-horeJose Mourinho oo sheegay in Paul Pogb...
33,284,246 unique visits